Umshini ozenzakalelayo "Schmeisser" - izikhali zomkhankaso osempumalanga
Ezemidlalo nokuPhepha, Izinsiza
Ngokomlando, ngenxa ye-cinema yaseSoviet, iSmississer, i-MP-40 efanayo, yaba uphawu olufanayo olufanayo "nezilo ezinomunwe" njenge-antipode yayo yamaSoviet-warriors-liberators. Le nthano yayisekelwa ngokuqinile futhi iyalinywa kulo lonke leminyaka emashumini empi. Eqinisweni, umshini "Schmeisser" wawungakaze ukhulu kakhulu, noma izikhali ezidume kakhulu ze-Wehrmacht eMpini Yezwe Yesibili. Ngaphezu kwalokho, umklami waseJalimane onethalente uHugo Schmeisser wayengeke ahlobene kakhulu nokudala uM MR-40. Njengoba engunjiniyela we-armory inkampani uHenel, wadala onobuhle bangaphambili - MP-18 kanye MP-28. Umshini "Schmeisser" - leli yigama elivamile lazo zonke izinguquko zalesi sibhamu esincane.
Njengakwezinye izindawo eziningi zomshini osebenzayo, abaklami baseJalimane bebelokhu becindezela izindima emhlabeni ekudaleni izikhali ezintsha kakhulu. Kuze kube manje, kuvame ukukholelwa ukuthi kwakuseJalimane ukuthi babe ngabokuqala ukuthuthukisa nokuhlela ukukhiqizwa kwemikhawulo yezingalo ezincane eziguquguqukayo njengezibhamu zomshini. Ukuqala kwahlelwa emuva ngo-1917, lapho owaziwa kakhulu ngaleso sikhathi umklami uHugo Schmeisser wadala isibonelo sokuqala sezwe sezingalo ezincane-MP-18. Ngemva kokuthuthukiswa okuncane okuncane, wangena ekukhiqizeni okuningi. Ngokumangazayo, ukuklama kwayo kwaphumelela kangangokuthi umshini "Schmeisser" wahlala enkonzweni kuze kube ngo-1928. Ukuthuthukiswa okuphawulekayo nokukhulu kakhulu kwe-MP-18 kungukungena esikhundleni somagazini we-drum wokuqala owafakwe ne-feeder-type feeder esikhwameni sebhokisi.
Isibhamu somshini waseJalimane "uShimeisser" saba yizingalo ezincane kakhulu zokuguqula iMpi Yezwe Yokuqala. Futhi ukuphela kokukhiqiza kwakhe okukhulu kwahlukunyezwa empini kanye nokusayinwa okulandelayo kweSivumelwano SaseVersailles. Zonke ukuguqulwa okulandelayo kwalesi sigameko sabantu abathintekayo baphoqelelwa amaJalimane ukuba ahlaselwe izikhali zamaphoyisa. Futhi ngokufika kwamandla weFihrer yabantu baseJalimane, umshini "Schmeisser" uthole impilo entsha. UMnu-38 no-МР-40, abajwayele kakhulu kumafilimu aseSoviet ngobuciko bempi, basungulwa esikhungweni sokuzivikela "Erma" ngokuhlanganyela ngokuqondile komqondisi wayo B. Heinel kanye nomklami we-talented Volmer. MR-38 noma "Schmeisser" yi-automaton, izici zakhe zobuchwepheshe eziwumphumela wokuthuthukiswa okuyimfihlo kwezikhali zobuchwepheshe iminyaka engamashumi amabili.
Kwakucatshangelwa nakho okuhlangenwe nakho kwempi yaseSpain enegazi. Umshini MP-38 wakhiwe ngokuvumelana nokubuya kwamahhala kwe-shutter, futhi ubukhulu obuningi abuzange buvumele ukuzamazama uma kudubula, ukuze kube nokuzinza okukhulu. Ezinye izinzuzo zalesi sigameko esincane senziwe ngokuklanywa kwayo elula, ekuhlelweni okuphumelelayo nokuklanywa kwesikhwama, kanye nezakhi zepulasitiki noma ze-aluminium ze-forearm ne-hilt. Ngaphezu kwalokho, ukuzenzakalela kwenqubo yokushaqeka, okuyinto yangaphambili evumele umlilo kuphela oqhubekayo, ishintshiwe.
Manje, ezinye ziyancipha ngesilinganiso somlilo esivunyelwe ukushisa ngomshini owodwa. I-MP-38 yayine-folding frame butt, okwenza isikhali sicubungele futhi sisebenze kahle. Lokhu kwafaka isandla ekusakazeni kwayo ngokushesha phakathi kwama-tankmen nasezindaweni ezingenakuphikisana. Futhi isibonelo esilandelayo - i-MR-40, esele isisikhali somkhankaso wempumalanga ngokwayo, senze izinguquko ezithile ukuze kuphuculwe izindleko zokukhiqiza kwayo futhi kube lula ukuklama. Imininingwane eminingi, ikakhulukazi ezimweni zempi eyayiqhamuka empumalanga, yakhiqizwa ngosizo lokugcizelela kanye nokukhwelisa. Kuzobunjwa ezihlelekile, umuntu angakwazi ukukhipha icala elibusayo lebhokisi le-shutter, ushintshe ingalo yokufaka kabusha futhi uqinise izindonga zomagazini.
Umphumela waba yisikhali esihlangene ngokuhlelekile ekuklanyeni kwayo uhlelo olulula kanye namandla alo ngokusinda nokululaleka kokugcinwa kwezimo ezinzima zokulwa. I-MP-40 ingabhekwa njengeyodwa yezibhamu ezingaphumelela kakhulu zeMpi Yezwe Yesibili. Futhi ukudideka kwamagama kwaqala lapho ama-"Schmisers" eqobo eqala ukuwela ezandleni zama-guerrillas, okungukuthi, amamodeli angasebenzi asetshenziswe kaningi emaqenjini angemuva we-Wehrmacht. Ngaphezu kwalokho, uHugo Schmeiss wakha ngo-1941 hhayi iPhalamende-41 ephumelele kakhulu, eyayibizwa ngokuthi "i-patent ka-Schmeisser" futhi efana neP MP-40.
Kuwo wonke iminyaka yempi, kwakhiqizwa amakhophi angama-30 000 eP MP-41. Mhlawumbe, ngenxa yalesi sibonelo, zonke izibhamu zaseJalimane ezise-Western izincwadi zaqala ukubizwa ngokuthi "Schmeissers". Futhi iphutha elinjalo ngokushesha lisakazeka ezincwadini ezifuywayo nasezincwadini.
Ukukhanya kwebhayisikili. Ungenza kanjani ukukhanya ebhayisikili?
Amabhayisikili amabhayisikili: ukubuka konke, izinhlobo, imininingwane kanye nokubuyekezwa
I-GT Avalanche Elite - isithonjana sebhayisikili
Ukugcinwa kwebhayisikili. Ukulungisa nokugcinwa kwamabhayisikili
Umshini wesibhamu M240: Uhlolojikelele
Indlela ukulawula izinga lokushisa Ukushisa ibhethri? Nabalawuli amalahle lokushisa radiators
Lapho isiphakamiso ubekwa dash? Ngo umusho, ufake dash?
Pads for ezahlukene ngenhloso nezicathulo
Ibhuloho phezu Bosphorus: indlela emfushane evela Yurophu nase-Asia
Imiphumela Zenkolo, le emihle nemibi
Yini ukuthatha imithi abezindaba otitis ezinganeni nakubantu abadala
Lwezezimali kabusha Witte: izimbangela, imiphumela
Isaladi French: Khetha iresiphi kwakho
Indlela ukudaya izinwele zakhe kusuka kokumnyama kuya umbala ukukhanya? ongakhetha eziningana
Izimbangela dandruff ka